Oniversite tsy miankina:TSY MANARA-DALANA NY 2/3 N’IREO TOERAM-PAMPIANARANA -
AccueilVaovao SamihafaOniversite tsy miankina:TSY MANARA-DALANA NY 2/3 N’IREO TOERAM-PAMPIANARANA
27/12/2016 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fangatahana miisa 800 no voarain’ny minisitera misahana ny fampianarana ambony hatramin’ny taona 2014 , eo amin’ny fangatahana fanomezan-dalana na ny « accreditation ». Maro ireo fepetra takiana ho amin’ny fahazoana ny fanomezan-dalana, zara raha ny 1/3 amin’ireo Oniversite tsy miankina no mahefeno ireo fepetra rehetra takiana. Mibaribary ny tsy fanarahan-dalàna, ho an’ny eto an-drenivohitra manokana izao dia ahitana fotodrafitrasa tsy mnara-dalàna mitsangana maro sy tsy fahampiana traikefa eo amin’ireo mpampianatra mizara ny fampiofanana. Misy ny rantsa-mangaika eo anivon’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony misahana manokana ny fanaraha-maso ireo Oniversite tsy miankina. Ny lanjan’ny diploma omen’ireo tsy manara-dalàna dia tsy hanan-danja mihitsy rehefa misehatra eo amin’ny asa ireo tanora, indrindra raha toa ka ho any ivelany ka haka ny « equivalence » eo anivon’ny minisitera. Tokony ho mailo hatrany ireo mpianatra sy ray aman-dreny amin’ny fanamarihana ny fahazoan-dalana hananan’ny sekoly. Anisan’ny fandrika na dia manana fahazoan-dalana ary ireo sekoly dia mety ho lany andro izany.
Tokony ho mailo…
Manam-petra eo amin’ny dimy taona ny fahazoan-dalana hananan’ny sekoly iray ary mila fanavaozana izany. Mila hatsaraina hatrany ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manaon’ireo mpampianatra, izay tokony hifanaraka amin’ny fampiofanana takiana sy manaraka ny fivoaran’ny vanin’andro. Tamin’ireo sekoly miisa fito izay nangataka ny fahazoan-dalana tamin’ity volana ity izao, rehefa natao ny fanadihadiana dia ny telo tamin’izy ireo ihany no nahazo an’izay fahazoan-dalana izay ny 23 ny volana Desambra lasa teo. Manao ny fanadihadiana hifotony ireo sampan-draharaha misahana ny fanomezana ny fahazoan-dalana ary tsy maintsy manara-penitra avokoa ireo fepetra takiana toa ny fotodrafitrasa sy ny mombamomban’ny mpampianatra rehetra ahafahana manamarina fa manana traikefa ho amin’izany izy ireo. Anisan’ny nasian-teny teo amin’ny maro an’isa tsy mpanara-dalàna ireo sekoly « Paramed ». Misy ireo manao kolikoly any ambadika ka mahatonga ny minisitera ho hentitra manoloana ny toe-draharaha raha ny nambaran’ny tale misahana ny sekoly miankina sy tsy miankina, DieuDonné Razafimahatratra. Manoloana ny fahatrarana tsy fanarahan-dalàna dia manome fe-potoana telo volana ho an’ireo tompon’andraikitry ny sekoly ny avy amin’ny minisitera. Aorian’izay kosa izy ireo vao miroso amin’ny fepetra raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ny fanasaziana izay ho tonga hatramin’ny fanakatonana ny sekoly.